ကင်ချီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟင်းရွက်အား ဆားရည်ဖြင့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ကိုရီးယား ရိုးရာ အရံဟင်းတစ်မျိုး
ကိုရီယားဟင်းလျာထဲမှ အဓိကစားသုံးသော တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကင်ချီ(/ˈkɪmtʃiː/; ကိုရီးယား: 김치, romanized: gimchi, IPA: [kim.tɕʰi])သည် ရိုးရာအရံဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆားရည်စိမ်ထားသော အချဉ်ဖောက်ထားသည့် မုန်ညင်းထုပ်၊ ကိုရီးယားမုန်လာဥကဲ့သို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဂိုချုဂါရူ (ကိုရီးယားငရုတ်သီးမုန့်)၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနှင့် ချော့ဂယ် (ငံပြာရည်ကဲ့သို့ ငန်သောရေထွက်ပစ္စည်းများ)နှင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကင်ချီအမျိုးပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကို အဓိကအခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသည်။ ရှေးယခင်တုန်းကတော့ ကင်ချီကို နွေလများ၌ အေးနေစေရန်နှင့် ဆောင်းလများတွင် မအေးခဲစေရန် မြေအောက်တွင် အိုးများဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားလေ့ရှိကြပြီး ထိုကာလများတုန်းက ဤသည်မှာ အရေးပါသော အသီးအရွက်ရင်းမြစ်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ နည်းပညာမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ ကင်ချီများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကင်ချီရေခဲသေတ္တာများကို အသုံးပြု၍ လာခဲ့ကြသည်။
မုန်ညင်းထုပ်နှင့် ကိုရီးယား မုန်လာဥတို့ပါဝင်သော အသီးအရွက်အမျိုးမျိုး
Baechu-kimchi, baek-kimchi, dongchimi, kkakdugi, nabak-kimchi, pa-kimchi, yeolmu-kimchi
Cookbook: ကင်ချီ Media: ကင်ချီ
ကင်ချီ၏မူလအစကို အတိတ်နှောင်းပိုင်းထိ သွားကြည့်မည်ဆိုပါက ကိုရီးယားသုံးပြည်ထောင်ခေတ် အစောပိုင်းကာလ(၃၇ ဘီစီ‒၇ အေဒီ)က စမည်ဖြစ်သည်။ အချဉ်ဖောက်ထားသည့် အစားအစာ အမြောက်အမြားရနိုင်သည်ဟု အေဒီ ၂၈၉ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့သော တရုတ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် သုံးပြည်ထောင်ခေတ်မှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရပြီး ထိုအထဲတွင် “ဂိုဂျူလျောပြည်သူ (ကိုရီးယားပြည်သူတို့အားညွှန်း)တို့သည် ဝိုင်၊ ပဲပြုပ်ချဉ် (ပုန်းရည်ကြီးကဲ့သို့)၊ ဆားချဉ်သိပ်ထားသော ငါးများလုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ကြသည်။” ဟု ဝေမင်းဆက်ရာဇဝင်ကျမ်း(Book of Wei)၏ "တုန်ရီ(Dongyi)"တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကိုရီးယားသုံးပြည်ထောင်ကျမ်း ဆောင်ဂုဆာဂီထဲတွင်လည်း အချဉ်စဉ့်အိုးများအား အသီးအရွက်များ အချဉ်ပေါက်ရန် အသုံးပြုကြသည်ဟု ညွှန်းဆိုထားသဖြင့် ထိုကာလတွင် များသောအားဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချဉ်ဖက်များကို အများအားဖြင့် စာသုံးကြသည်ဟု ညွှန်ပြနေသည်။ ရှီလာမင်းဆက်(၅၇ ဘီစီ – ၉၃၅ အေဒီ)ကာလအတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့ ကင်ချီသည်လည်း အရေးပါသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အသီးအရွက်ကို စားသုံးသော ဓလေ့ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
အသီးအရွက်များအား ဆားရည်စိမ်သည့်နည်းသည် ရေခဲသေတ္တာများထက် စောလျင်စွာ အစားအသောက်များ၏ သက်တမ်းအား ရှည်ကြာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည့် စံပြုနည်းတစ်နည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုရီးယားတွင် ကင်ချီများအား အချဉ်ဖောက်ထားသည့် အသီးအရွက်များဖြင့် ဆောင်းလကာလအတွင်း ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး မြေကြီးထဲတွင် အွန်ဂီဟုခေါ်သည့် ရိုးရာအညိုရောင်စဉ့်အိုးများဖြင့် မြေအောက်တွင် မြုပ်နှံထားကြသည်။ နောင်တွင် ဤအလုပ်သည် မိသားစုနှင့် မိန်းမသားကြား ခိုင်မြဲစွာတွဲဆက်ထားသော ကြိုးသဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤသို့ဖြင့် ကင်ချီဟာ ကိုရီယားယဉ်ကျေးမှုတွင် အရေးပါသော အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် သမိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသော ဟင်းချက်နည်းများတွင်တော့ ကင်ချီဟာ စပ်သော ဟင်းလျာတစ်မျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အစောပိုင်း ကင်ချီပြုလုပ်နည်းမှတ်တမ်းများတွင် ကင်ချီပြုလုပ်ရာတွင် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုတ်သီးမှုန့်ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုမထားကြပါဘူး။ ယခုအခါ ကင်ချီပြုလုပ်ရာတွင် အဓိကအမယ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေသော ငရုတ်သီးမှုန့်ကို ၁၇ ရာစုအစောပိုင်းကာလအထိ ကိုရီးယားတွင် သိရှိခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ ငရုတ်သီးမှုန့်၏ မူလအစမှာ အမေရိကတိုက်မှဖြစ်ပြီး အရှေ့အာရှကို ပေါ်တူဂီကုန်သည်တို့ သယ်ယူရောင်းချရာမှ သိရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငရုတ်သီးမှုန့်အား ရည်ညွှန်းသည့်စာကို ပထမဆုံးတွေ့ရသည်မှာ ၁၆၁၄ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့သော ဂျီဘုန်းယုဆေး(Jibong yuseol ) ဟုခေါ်သော စွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖြစ်သည်။ ၁၇‒၁၈ ရာစုတွင် ရေးသားခဲ့သည့် ဆာလင်းဂျုံဆေ (Sallim gyeongje) စာအုပ်တွင် ကင်ချီကို ငရုတ်သီးမှုန့်ဖြစ် ပြုလုပ်နည်းကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ပေမယ် ၁၉ ရာစုမတိုင်မီအထိတော့ ကင်ချီထဲတွင် ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့်ခြင်းမှာ သိပ်ပြီးတွင်ကျယ်လှခြင်း မရှိသေး။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်း ဟင်းလျာပုံစံများမှသာ ယနေ့ခေတ် ကင်ချီနှင့် အတော်လေးကို ဆင်တူသည့် ဟင်းလျာပုံစံတို့ကို တွေ့ရှိလာသည်။
၁၇၆၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေးခဲ့သော ဂျန်ဘိုဆာလင်းဂျုံဆေ (Jeungbo sallim gyeongje) တွင် ကင်ချီပုံစံအမျိုးမျိုးကို များလှစွာသော အမယ်တို့ဖြင့် မတူကွဲပြားစွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို ရေးသားထားသည်။ မုန်ညင်းထုပ်ကို ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ကိုရီးယားတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် မုန်ညင်းထုပ်တစ်ခုလုံးနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ကင်ချီသည် ထိုကာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ်ဖြစ်သော ဆီရီးချန်ဆောင် (Siuijeonseo) တွင် ဖော်ပြထားသည်နှင့် ဆင်တူသည်။
ကင်ချီသည် တောင်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံး၏ ရိုးရာဟင်းလျာဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် ကိုရီးယားတို့ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရစဉ်က ကိုရီးယားအစိုးရက စစ်မြေပြင်တွင် ကိုရီးယားစစ်သားတို့ “စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း” မရှိစေရန် ရိက္ခာတွင် ကင်ချီ မပါဝင်မဖြစ်ပါဝင်ရန် အမေရိကန်အား ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ပတ်ချုန်ဟီးက အမေရိကန်သမ္မတ လန်ဒန် ဘန်းနက်စ် ဂျွန်ဆင်အား ကင်ချီအား “ကိုရီးယားစစ်သားတို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါသောအရာ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံရန်ကာ ဘတ်တီးရီးယားများကို သတ်ပြီး အရသာမပျက်စေပဲ မနှစ်သက်ဖွယ် အနံ့အသက်တို့ကို လျော့ချပြုပြင်ပြီး တောင်ကိုရီးယားအာကာသယာဉ်မှူး ရီဆိုယွန်းနှင့်အတူ နှင့် အာကာသထဲသို့ ထည့်ပေးခဲ့သေးသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Google Doodle မှ "Celebrate Kimchi" ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
↑ Kimchi (1 October 2008)။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Chin၊ Mei။ "The Art of Kimchi"၊ Saveur၊ 14 October 2009။
↑ McAninch၊ David။ "A World of Kimchi"၊ Saveur၊ 14 October 2009။
↑ Pettid၊ Michael J. (2008)။ Korean Cuisine: An Illustrated History။ London: Reaktion Books။ pp. 47–51။ ISBN 978-1-86189-348-2။
↑ Bayor၊ Ronald H., ed. (2011)။ Multicultural America: An Encyclopedia of the Newest Americans။ Santa Barbara, CA: ABC-CLIO။ p. 1349။ ISBN 9780313357862။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ Hui၊ Y. H.; Ghazala၊ Sue; Graham၊ Dee M.; Murrell၊ K. D.; Nip၊ Wai-Kit, eds. (2004)။ Handbook of Vegetable Preservation and Processing။ New York: Marcel Dekker။ pp. 190–191။ ISBN 978-0824743017။
↑ Chén၊ Shòu၊ "Wūwán Xiānbēi Dōngyí chuán 烏丸鮮卑東夷傳"၊ Sānguózhì 三國志 [Records of the Three Kingdoms] (တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်)၊ Jin China – via Wikisource
↑ Busik၊ Gim (1145)၊ Samguk Sagi 삼국사기(三國史記) [History of the Three Kingdoms] (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)၊ Goryeo Korea – via Wikisource
↑ ၉.၀ ၉.၁ Logarta, Margie T. (September 2013). "In A Pickle". Business Traveller (Asia-Pacific Edition): 70–73.
↑ Kimchi. (2016). Funk & Wagnalls New World Encyclopedia, 1p. 1.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Guide to Korean Culture: Korea's cultural heritage (2015 ed.)။ Seoul: Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism။ 2015 ။ pp. 131–133။ ISBN 9788973755714။
↑ Park၊ Jae Bok။ "Red Pepper and Kichi in Korea" (PDF)၊ Chile Pepper Institute Newsletter၊ Spring 1999၊ pp. 3။6November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7October 2018။
↑ Marianski၊ Stanley; Marianski၊ Adam (2012)။ Sauerkraut, Kimchi, Pickles & Relishes။ Seminole, FL: Bookmagic။ p. 45။ ISBN 9780983697329။
↑ Yi၊ Sugwang၊ Jibong yuseol 지봉유설(芝峯類說) [Topical Discourses of Jibong] (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)၊ Joseon Korea – via Wikisource
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Cho, Hong Sik (2006). "Food and Nationalism: Kimchi and Korean National Identity". The Korean Journal of International Studies4(1): 207–229. doi:10.14731/kjis.2006.12.46.5.207.
↑ Jeong၊ Hakyu။ "Siwol" 시월(十月) [Tenth month]။ Nongga wollyeongga 농가월령가(農家月令歌) [The Songs of Monthly Events of Farm Families]။
↑ Hong၊ Seokmo။ Dongguk sesigi 동국세시기(東國歲時記) [A Record of the Seasonal Customs of the Eastern Kingdom]။ Joseon Korea။
↑ Yu၊ Jungrim; Hong၊ Manseon (1766)။ Jeungbo sallim gyeongje 증보산림경제(增補山林經濟) [Revised and Augmented Farm Management]။ Joseon Korea။ Invalid |script-title=: missing prefix (အကူအညီ)
↑ Unknown (1919) [late 19th century]။ Siuijeonseo (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)။ Manuscript by Sim Hwanjin။ Sangju, Korea။ 12 March 2017 တွင် မူရင်း |archive-url= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ lay summary – Korean Food Foundation။ |access-date= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ)
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Sang-hun၊ Choe။ "Starship Kimchi: A Bold Taste Goes Where It Has Never Gone Before"၊ The New York Times၊ 24 February 2008။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်ချီ&oldid=696606" မှ ရယူရန်
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။